China Ingidi, ilingisa ithusi lokukhiya, insimbi engagqwali ilokhi, ukukhiya amaqabunga, ilokhi yokulwa nokweba, ukukhiya kwephasiwedi, ukukhiya izigxivizo zeminwe namanye amafindo efektri nabakhiqizi | Boda
Kunezinhlobonhlobo eziningi nokucaciswa kwama-padlocks. Ngokuvamile, ubukhulu belokhi bunqunywa ngobubanzi bomzimba wokukhiya, inhloso yesikhiya kunqunywa ukuphakama kwesigxobo sokukhiya, futhi uchungechunge lwamalokhi lunqunywa izindlela zokuvula zengidi, njengokuqondile ukuvulwa, ukuvulwa okuvundlile, ukuvulwa okuphezulu nokuvula kabili. Izingidi zethu ezisetshenziswa kakhulu zivulekile ngokuvulekile nangokuvundlile.
Okusho ukuthi, lapho ukhiye ufakwa esitsheni sokhiye wesilinda sokukhiya, ilokhi ingadonselwa phezulu ngaphandle kokushintshana, okubizwa ngokuthi "ukuvula phezulu". Lolu hlobo lokukhiywa lufanele ikakhulukazi ukubamba izinsana noma ukuthwala abantu abavulekile abangafaneleki ukubeka phansi izindatshana. Okubizwa nge- "double lock" kubhekiswa kukhiye ongavulwa kuphela lapho kusebenza okhiye ababili. Inokusebenza okuqinile kwezokuphepha futhi ilungele imicimbi lapho abantu ababili kudingeka ukuthi bayigcine khona futhi abantu ababili bakhona ukuvula ilokhi ngasikhathi sinye, njengokugcina impahla kanye nebhange.
Ngaphezu kokuhlukaniswa kwamapayipi ngokuya ngemodi yokuvula (ukuvulwa okuqondile, ukuvulwa okuvundlile, ukuvulwa okuphezulu, ukuvulwa okuphindwe kabili), singakwazi futhi ukuwahlukanisa ngokuya ngesakhiwo sangaphakathi sezingidi. Izinhlobo ezijwayelekile zimi ngale ndlela elandelayo: Ingidi yesakhiwo semabula
Ingidi eyodwa yokhiye wokhiye
Lolu hlobo lokukhiya lusebenzisa intwasahlobo eyindilinga ukusetha izithiyo kusilinda wokukhiya, ukuze isilinda sokukhiya singakwazi ukujikeleza futhi sifeze umsebenzi wokukhiya. Isakhiwo se-Bullet singesinye sezakhiwo ezisetshenziswa kakhulu ezingakhiweni. Umzimba wokukhiya wohlobo lwengidi uvuleke ngezingcezu zensimbi, okunikeza abantu umuzwa wokujiya nokuqina. Ibizwa ngokuthi "ukukhiya ungqimba eziyizinkulungwane". Kodwa-ke, ukwakheka kwayo kwangaphakathi nakho kuyisakhiwo se-billiard, ngakho-ke kungokwesigaba sesakhi senhlamvu. Lolu hlobo lwengidi lisebenzisa ishidi lensimbi elinezimo ezihlukene ukuvimba nokukhiya. Lolu hlobo lwesakhiwo luvame ukusetshenziselwa i-zinc alloy noma izingidi zalo ze-alloy.
Ingidi yesakhiwo Magnetic:
Ngokwesimiso sokudonswa ngamandla kazibuthe, uhlelo lwe-magnetic lock cylinder luyamukelwa. Ibhodi lokwahlukanisa insimbi kazibuthe elinopuleti kazibuthe ofanayo njengoba ukhiye ufakwa phakathi komgogodla wokukhiya nempini yokuphepha. Ukhiye awuxhumani ngqo nomphini wokuphepha. Lapho i-non slot key key ifakwe kahle kusilinda slot, ukhiye uthinta ipuleti lokuhlukanisa insimbi bese wenza amandla aqinile okubuyisa, okwenza ilokhi ivuleke kalula. Ngaphezu kwalokho, umgomo wokuheha kazibuthe uyasetshenziswa futhi ukudweba ipuleti lensimbi ngokuqinile nokuvula ilokhi ngentwasahlobo.
Ingidi yilezi: ingidi engagqwali, ingidi yethusi, ingidi yensimbi eboshelwe nge-Du, ingidi yensimbi empunga, ingidi yethusi elingisa, ingidi ye-zinc ingxube, ingidi yemfoloko
1. Ingidi yensimbi engenasici: lolu hlobo lwengidi lubonakala ngokumelana namandla kwe-oxidation futhi lulungele ukusetshenziswa kwangaphandle. Kodwa-ke, ngenxa yobunzima bokucubungula nezindleko eziphezulu, kuyaqabukela kusetshenziswe eChina.
2. Ingidi yethusi: impahla eyinhloko yelokhi ngethusi, kanti esetshenziswa kakhulu ingidi encane yethusi, engaphansi kuka-40mm ngosayizi, ikakhulukazi ngoba intengo yethusi iphakeme kakhulu.
3. Ingidi Zensimbi: zivame kakhulu.
B. Ingidi yensimbi empunga: indawo iphathwa ngopende ompunga, bese kuvela izingidi eziningi ezimibalabala, konke okungokwalolu hlobo.
C. Ingidi yethusi elingisa: ingeyengidi yensimbi ekhethiwe, ebhekisa engxenyeni yethusi ebusweni
4.I-Zinc alloy ingidi: lolu hlobo lwengidi lubunjwa ngomshini wokuphonsa u-die ngokunemba okuphezulu.
1. Ilokhi yemfoloko
2. Ukhiye weketanga
3. U-hlobo lokukhiya
IBOSENDA ihlinzeka ngezingidi ezahlukahlukene, izingidi zethu ezithunyelwa emazweni aseNingizimu ye-Asia eseNingizimu, eSouth America, eYurophu, emazweni ase-East EU kanye naseMpumalanga Ephakathi. Ngeminye imininingwane, zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi.
Langaphambilini Indwangu ye-PVC yemvula, indwangu yobufakazi bemvula ye-PE, ikhava yeloli
Olandelayo: Chain, ephakamisa uchungechunge, lashukumisa chain, insimbi engagqwali uchungechunge, Ukucaciswa ahlukahlukene
Ukukhiya Kwensimbi Engagqwali